Ekena sa tsia ny fanamelohana ho faty?
2007-10-17 @ 08:17 in Andavanandro
Fanontaniana hiteraka adi-hevitra avy hatrany araka ny fiheverako azy. Nanontany tena tany amin’ny lahatsoratra nosoratany ny namana Tomavana hoe fa angaha mbola mihatra eto Madagasikara ny lalàna momba ny fanamelohana ho faty? Eto Aho no mamaly azy fa mbola manankery tokoa ny lalàna momba izany fanamelohana ho faty izany saingy tsy mbola nampiharina mihitsy hatramin’ny nahazoana ny fahaleovantena indray. Izay didim-pitsarana rehetra manonona ny fanamelohana ho faty dia miova ho fanagadrana mandra-pahafaty ho azy avokoa. Fiheverako azy: tsy mahavita mamono olona fotsiny amin’izao ny malagasy olo-tsotra. Olon’ny fo izy ka onena hatrany raha manao zany fihetsika izany.